विनोद बुढाथोकीको अध्यक्षतामा डाइनामिक मोरङ कमिटिको नयाँ कार्यसमिति - Fonij Korea
डाईनामिक मोरङ कमिटी दक्षिण कोरियाको पाचौं अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा बिनोद बुढाथोकीलाई चयन गरेको छ। जनवरी २४ शुक्रबारको अधिवेशनले डाइनामिक मोरङ कमिटिको १५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो।
नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सन्तोष तिम्सिना र उपाध्यक्षमा सुरेन तामाङलाई चयन गरेको छ। यसैगरी महासचिवमा युवराज फुयाल सचिवमा मनोज बिष्ट छन् भने कोषाअध्यक्ष हेमन्त खतिवडा र सह कोषाध्यक्षमा उमेश पोख्रेल चयन भएका छन्। सदस्यहरुमा बिक्रम राई, बिश्वास रायमाझी, तारानाथ निरौला, खेमराज भट्टराई, संजय बिष्ट, लक्ष्मी तामाङ, अन्जना भट्टराई शिवाकोटी र आयुष उप्रेती रहेका छन्।
नव गठित कार्यसमितिलाई निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष डा. देवि बहादुर बस्नेतले सपथ ग्रहण गराएका थिए। निर्वाचन मण्डलका अन्य सदस्यहरुमा जीवनकुमार थापा, चन्द्र फुयाल र नवराज सिवाकोटी रहेका थिए। दोङ्देमुन स्थित नेरोशा रेष्टुरेन्टको सभाहलमा डाइनामिक मोरङ कमिटिका संरक्षक डा. देवि बहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्य र निवर्तमान अध्यक्ष भुवन तिम्सिनाको सभापतित्वमा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।
प्रवासमा रहेको मोरङ्गेलीहरुको एकता सदभवा सहकार्यको निम्ति सन २००९ मा स्थापित यस डाइनामिक मोरङ कमिटिले कोरिया तथा नेपालमा समेत विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ।